Tuesday July 15, 2014 - 21:20:05 in Wararka by Web Admin
Akhristow haddii aad doonayso inaad ka jawaabto, su'aasha ciwaanka maqaalkaan oo ah: "Dowlada dhexe maxay u hanan la'dahay dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabka?" Waxaa laguugu wargelinayaa in ay jiraan khubaro aad ula socotay arr
aqoonyahano iyo qorayaal Soomaaliyeed oo aad u aaminsan, wixii ka danbeeyey burburkii dowladii dhexe ee Somaaliyeed sanadkii 1991-dii, inay siyaasada Soomaaliya ay wadeen laba (2) matoor, labadaas matoor oo kala ah, matoor gudaha ah, iyo mid dibadda ah ( internal engine and foreign engine).
Matoorka dibada ( foreign engine) waa beesha caalamka oo ay ka muuqanaayaan calaamado muujinaaya inay beesha caalamku ay aad ugu kala aragti duwan tahay, qaabka loo caawinaayo Soomaaliya, balse ka mideysan tahay in xasilooni darrada iyo fowdada ka jirta Soomaaliya in aysan ku fidin gobalka oo dhan iyo adduun-weyna intiisa kale, nasiib darro, kala aragti duwanaashahaas beesha caalamka, waxay Soomaaliya badey dhibaatooyin fara badan, dhibaatooyinkaas ayaa dowlada dhexe ee federaalka ka dhigtay mid uun magac u taagan, laakiin aan wax badan qaban karin ( idle), dhibaatooyinka ay beesha caalamku ku hayso dowlada dhexe ee federaalka waxaa ugu waaweyn:-
1) Beesha caalamku waxay ka leex leexataa inay Soomaaliya u dhisto ciidan qaran oo mustaqbalka hanta dalka oo dhan, laakiin beesha caalamku kama ey leex leexato in ay ciidamo shisheeye oo fara badan dhaqaalo ku bixiso si ay Soomaaliya uga hawl galaan, taas oo la micno ah ha dhiman hana noolaan ( life support).
2) beesha caalamku waxay inta badan ku guul-dareysataa inay bixiso dhaqaalaha Soomaaliya looga yabooho shirarka caalamiga ah, tusaale ahaan bartamihii sanadkii 2013, magaalada Brussels ee wadanka Belgium, beesha caalamku waxay Soomaliya ugu yaboohday dhaqaale ku dhowaad gaaraayay, 2.5 billion dollar, sida la sheegaayana ilaa hadda wax naf leh soo magaarin dowlada dhexe.
3} Beesha caalamku waxay si dadban u dhiirigelisaa is-maamul goballeedyada diidan dowlada dhexe, is-maamul goballeedyadaan ayaa dowlada dhexe ula ficiltama sida laba (2) dowladood oo siman, taas oo dowlada dhexe ka dhigtay, dowlad nugul ah ( fragile government).
4) Qaar kamid ah saraakiisha beesha caalamka, waxay mar mar ku xad-gudbaan qaranimada Soomaaliya ( sovereignth abuses), waayoo waxaad mar mar arkeysaa sarkaal hoose oo ka socda xafiis ka mid ah kuwa beesha caalamka oo isku dayaaya in uu asagu amar siiyo madaxda dalka.
5) Waxaa jira shaki laga qabo, qaar ka mid ah dowladaha deriska ah inaysan rabin inay Soomaaliya dib ay cagaheeda isugu istaagto, laakiin ay wadaan waxa loo yaqaan "qowda maqashii waxna how qaban", intaas waxaa ka sii daran qaar kamid ah ciidamada dowladaha deriska waxay mar-mar la saftaan maleeshaya beeleedyada Soomaaliyeed qaarkood, taas oo Soomaalida intooda badan ay aad uga caroodaan, gaar ahaan Soomaalida degta gobalka Gedo.
Cilladaha matoorka gudaha ( internal engine defects) aad ayey u fara badan yihiin balse waxaa ugu daran:-
1) Baarlamaan aanan intiisa badan ku yimaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, balse ku yimid laaluush ay siiyeen Duubabkii xilligaas soo xulaayey xildhibaanada Baarlamaanka FS, baarlamaankan oo jiri doono muddo afar (4) sano ah 2013-tiin ilaa 2016-tiin, xildhibaanadu maadaama ay intooda badan baarlamaanka ku soo galeen laaluush, waxaad moodaa inay xildhibaanadu mudnaanta kowaad siiyeen sidii ay "mooshino" uga keeni lahaayeen madaxda dalka, meeshii laga doonaayay inay xildhibaanadu mudnaanta kowaad siiyaan sidii wax looga qaban lahay, dhibaatada Soomaaliya ee 24 sano jirsatay.
2) Ururka xarakada Al Shabaab oo markasta la soo taagan ciddii sheegata dowladnimo iyo wixii taageeraba waa gaalo, ururkaan oo inta badan sheegta dilalka iyo qaraxyada ka dhaca guud ahaan bariga Africa, gaar ahaan gudaha Soomaaliya.
3) Beelo isku magacaabey is-maamul goballeedyo ay gadaal ka riixaayaan dowlado shisheeye iyo ururro caalami ah oo aanan rabin inay Soomaaliya dib u midowdo ayaa dowlada dhexe lugaha ku dhegan.
4) Dowlada dhexe oo ku guul-darreysatay wax ka qabashada seddax (3) arrimood oo aad muhiim u ah, seddaxdaas oo kala ah:-
b) guud ahaan amniga dalka oo aad u hooseeya, gaar ahaan caasimada Muqdisho, inkastoo dhowaan is-bedel weyn lagu sameeyey madaxda hay'adaha amniga qaranka, sida magacaabida Wasiirka Wasaarada Amniga qaranka, Taliyaha Booliska Soomaliyeed iyo Agaasimaha Hay'ada sirdoonka iyo nabad sugida qaranka, balse la arki doonee wixii ay soo kordhiyaan?.
t) addeegga Garsoorka oo muddo dheer laga cabanaayay,
x) addeegyada bulshada oo weli laalan iwm.
5) Isla xisaabtan la'aan ( lack of accountability), taas oo shacbiga Soomaaliyeed ku abuurtay shaki ah in mas'uul kasta, marka uu xilka ka degaayo, haddii uu doono uu iska xaabsado xoolaha ummadda.
6) Dowlada dhexe ee FS waxaa lagu eedeeyaa, inay ku guul-dareysatay aqoonsiga iyo xushmada ay mudan yihiin Xildhibaanadii hore ee Baarlamaanadii KMG ahaay, Xildhibaanadii hore waxay mudan yihiin in loo aqoonsado waalidiinta siyaasiinta maanta, sidoo kale dowladu waxay ku guuldarreysatay daryeelka Naafadii xogga dalka Soomaaliyeed ee xubnahoodii ku waayay dagaaladii 1964-kii iyo 1977-kii iwm, inkastoo ay mar mar wax ku tuurto naafadaas marwada Madaxweynaha DFS Marwo Qamar Cali Cumar.
7) Dowlada dhexe waxaa lagu xantaa inaysan soo dhowayn muwaadiniinta Soomaaliyeed ee daacada u ah dalkooda, dadkooda iyo diintooda, balse dowlada dhexe waxay soo dhowaysay qaar badan oo shar wadayeel ah, shacabkuna uu aad u dhibsado iyo qaar lagu soo dhoweeyey qaabka 4.5.
8) Dowlada dhexe ayaa lagu xantaa inay ku xad-gudubto hab-maamuuska dowladnimo ( protocol abused), waayoo waxaad arkeysaa hawl uu leeyahay Agaasime waaxeed Wasaaradeed oo ay qabanaayaan madaxda dalka ugu sarreysa.
Dowlada dhexe ee FS maxay u hanan la'dahay dalka oo dhan iyo kalsoonida Shacabka Soomaliyeed?!!.